Gịnị bụ mmekọrịta gị na Social Media? | Martech Zone
“Never nwetụghị ohere nke abụọ ịme mbụ echiche, ”m prọfesọ azụmahịa, Marvin Recht, na-echetara ụmụ akwụkwọ ya oge niile. Emela ihe ọtụtụ ndị mejọrọ n’ihu gị.
N’ụwa taa, echiche mbụ nke echiche ka na-eme ezi. Agbanyeghị, ndị ahịa dijitalụ na soshal midia na-enye anyị ohere ijikọ n'ụzọ nke anyị enweghị ike n'oge gara aga. Na echiche na ị ga-ahapụ na ibe Facebook gị, iyi Twitter, ma ọ bụ weebụsaịtị nwere ike ịnwe ụfọdụ ndị mmadụ na-ekpe ikpe ma na-eme mkpebi tupu ha amata gị, ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ ngwaahịa gị.
Gịnị bụ ebum n’uche gị? Kedu ihe bụ echiche ị na-anwa imere onwe gị? Kedu ụdị ndị ahịa ị na-adọta site na ịnapụta echiche ị na-arụ? Ọ dị mkpa ijide n'aka na ị nwere ụkwụ kacha mma n'ịzụ ahịa ọ bụla ị na-arụ iji wulite nnukwu ịkparịta ụka n'socialntanet na echiche ziri ezi.
Yabụ, olee mmetụta ị na-enwe? AdTruth enyela ihe omuma a, Echiche Ziri Ezi.
Tags: Mmetụta iziziMmetụtaSocial Media Marketing
Meen bụ Butler ahịa na-amụrụ interning na otu na DK New Media. Ọrụ Meen gụnyere nyocha na imepụta ọdịnaya maka ndị ahịa ha, n'okpuru nduzi nke Jenn Lisak.
You dị njikere maka ezumike ahụ